Ukusela amanzi okusela → Ukusela imithombo yamanzi • Ukusela iipasile zamanzi
Sinikezela ngeziphuzo zamanzi okusela kwimfundo, kwishishini leHoReCa, ukhathalelo lwempilo, ikhaya, iiofisi, amaziko oluntu, iipaki, amaziko ezemidlalo kunye nabanye abaninzi.
Ukuqinisekisa umgangatho amanzi osela Ngumxholo wemizamo yamaziko amaninzi kunye nabavelisi beenkqubo ezizodwa ezisetyenziselwa unyango lwamanzi.
Amanzi okusela kufuneka akhululeke kuzo zonke ii-microorganisms ze-pathogenic kunye nee-microelements eziyingozi kwaye kufuneka abe nolusu olufanelekileyo.
Amanzi okusela asemgangathweni ophezulu iqinisekisa uyilo oluchanekileyo, ulwakhiwo kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yokuhambisa amanzi kunye nogutyulo lwendlu kwisakhiwo okanye kwindawo yedolophu kunye nokuthintela ukungahambi kwamanzi, amaqondo obushushu lawo angabi ngaphezulu kwe-25 ° C.
Ukusela imithombo yamanzi
Ukuba kukho isidingo sokubonelela ngokufikelela kumanzi okusela kwinani elikhulu labantu, kufanelekile ukuqwalasela isisombululo sanamhlanje nesikhuselekileyo, njengamanzi emithombo yokusela.
Ezo ziselo zinzipho zicocekile kwaye kulula ukuzisebenzisa ezibonelela ngamanzi abandayo okanye kwigumbi lokushisa kwaye zilungele izithuba ezisetyenziswa linani elikhulu labantu. Esi sisombululo sele sisetyenziswa ixesha elide kwamanye amazwe kwaye sigqibelele kwiiofisi, ezikolweni, kwizityalo zemizi-mveliso, kwizikhululo zikaloliwe nakwizikhululo zeenqwelo moya, i.e.aphi na apho kukho isidingo sokubonelela ngamanzi okusela kumaqela amakhulu abantu.
Ngokunxulumene nobhubhane we-COVID-19, sizibuza ukuba kwenzeka njani, ngokuhambelana nezikhokelo zeSanepid kunye nokukhathalela impilo yabemi, ukusombulula ingxaki yokwanelisa ukunxanelwa kwabantu kwiindawo ezisezidolophini nakumaziko oluntu ngendlela ekhuselekileyo.
Bona kwakhona: Izikhululo zokubulala iintsholongwane ngesandla yaye Inkqubo yokulawula amagumbi okubulala iintsholongwane kusetyenziswa indlela yenkungu eyomileyo
Xa sijonga izixhobo ezilula nezicocekileyo zokuzisebenzisa, kwaye zikhetheke ukuba izandla ezingenazandla, iinkampani ezivelisa abasela kunye nemithombo yokusela yamanzi zinika isisombululo, ukusetyenziswa kwazo kuqinisekisa ucoceko oluphezulu.
Xa ukhetha umthombo wamanzi okusela entwasahlobo nangona kunjalo, zikho izinto ezimbalwa ekufuneka ziqaphele
Sicinga, kunjalo, ukuba Amanzi avela kwiimpompo zethu ikumgangatho olunge kakhulu, onokumiselwa ngokulula ngoku-odola uvavanyo olufanelekileyo ukuba lwenziwe kwisikhululo esikufutshane sanitary kunye ne-epidemiological. Ukuba kuyabonakala ukuba yethu amanzi etephu inomgangatho ophezulu, kusetyenziswa amanzi emithombo yokusela.
ezi baseli ikwabizwa ngokuba ziimbiza zamanzi, sisixhobo esivumela ukusetyenziswa kwamanzi acocekileyo, apholileyo ngaphandle kwemfuno yezitya. Amanzi acocekileyo nasempilweni ayafumaneka nangaliphi na ixesha, ngobukhulu kwaye kumntu ngamnye.
Ukusela iipasile zamanzi Zingasetyenziswa ngempumelelo ezikolweni, ezinkulisa, kwiindawo zokusebenza, kwiiofisi nakuzo zonke ezinye iindawo zikawonke-wonke, apho abathengi kunye neendwendwe, abafundi kunye nabasebenzi badinga ukucima ukunxanelwa kwabo.
Xa ukhetha umthombo wamanzi okusela afanelekileyo, kuya kufuneka unake kungekuphela nje ukubonakala kwesixhobo, kodwa kunye nokusebenza kwaso.
Iziselo ezisimahla ziya kusebenza ngaphezulu kwindawo enye, kunye nokuxhonywa kwenye. Ngamanye amaxesha inkqubo yokupholisa amanzi ayimfuneko. Eminye imithombo yokusela yamanzi ifakwe itephu eyongezelelweyo eyenza kube lula ukuzalisa isb. Imithombo yokusela yamanzi inokusebenza ngeenyawo ezinyaweni, iqhosha okanye ifoto. Ezinye zezixhobo zikulungile Iifilitha zamanzi.
Inzuzo engathandabuzekiyo yokusela kwimithombo yamanzi okusela yimithombo yokunxibelelana nenkqubo yokuhambisa amanzi kunye nokusetyenziswa kwamanzi abalekayo, nto leyo ibangela ingxaki yokugcwalisa iibhotile zamanzi ziphele, kwaye ukusetyenziswa kucocekile kunye nendalo, ngaphandle kokusebenzisa iikomityi zeplastiki.
Imithombo yokusela yenziwa ngayo yentsimbi ebunjiweyo, umgubo ugutywe ngeqhosha le-nickel-plated yobhedu.
Ngaphambili / iipleyiti zangaphambili zenziwe ngentsimbi ye-corten okanye i-powder edityanisiweyo okanye isinyithi. I-tar yenziwe ngentsimbi yegalvanised.
Imithombo yokusela iza kuphela ne-logo yesiko las lasikweni.
Okwangoku Iindlela zakhiwo yoyilo banyanzela abavelisi bemithombo yamanzi okusela ukuba baphumeze iiprojekthi ezilungelelaniswe nesitayile esikhoyo kwaye besebenzisa izixhobo ezizodwa kunye noyilo lwamva kwiimveliso zabo. Unikezo lubandakanya zombini iimveliso ezinokwakhiwa kweklasikhi kunye nefom ye-minimalist.
Iindawo zokusela zamanzi zikwanikezelwa kwiindawo ezifana neepaki, indawo yokudlala kunye negadi.
namhlanje Imithombo yegadi Ke, banokuphumeza ngempumelelo kungekuphela nje imisebenzi yobuhle, ekuhombiseni indawo, kodwa banokunikezela namanzi okusela akumgangatho ophezulu.
Eminye imodeli baseli zenzelwe nezilwanyana.
Ukusela iipasile zamanzi kunceda ukukhathalela indalo esingqongileyo ngokunciphisa isixa senkunkuma eveliswayo xa usela amanzi afakwe ibhotile okanye xa usebenzisa iikomityi zeplastiki.
Imithombo yokusela emanzi ethululwayo ifanelekile ukusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle. Ezi zixhobo zenziwe zezona zixhobo zikumgangatho uphakamileyo kwaye ukwakhiwa kwazo kuvumela ukusetshenziswa okuyindalo, ucoceko kunye nokukhululeka kokusetyenziswa.
Ezinye izixhobo zikuvumela ukuba ufumane amanzi kwiqondo lobushushu begumbi, ukubanda, ukubabaza kwaye kushushu. Esisisombululo esifanelekileyo kubaqeshi abanokuthi babonelele ngokulula abasebenzi ngokufikelela kumanzi okusela acocekileyo.
Umatshini wokuhambisa amanzi kwi-Pro-Stream. Kubanda, kushushu kwaye kuyanetha. Jonga iinkcukacha ezithe kratya apha
Ukusela imithombo yamanzi avela kwindawo yasezidolophini kuvumela ukuba kukhuthazwe ubomi bendalo kwaye kuphuhliswe iindlela zokutya ezisempilweni, ngakumbi xa kuziwa kucoceko kunye nokusetyenziswa rhoqo kwamanzi acocekileyo okusela.
Imithombo yokusela yamanzi iyasebenza, ukumelana nomonakalo kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Eminye imithombo yamanzi okusela asetyenziswa kwindawo yangaphandle inokusebenza unyaka wonke ngenxa yokusetyenziswa kweevalvu ezikhethekileyo zokulwa neqhwa.
Imithombo yokusela yanamhlanje yemithombo yokusela - imithombo kulula kakhulu ukuyisebenzisa kangangokuba inokusetyenziswa lula ngabantwana nangabantu abadala, kwaye ngenxa yokuhlengahlengiswa kwesiselo esisezingeni lokuphakama lomntu usebenzisa isixhobo.
izinto zentwasahlobo zamanziumthombo wekhonkrithiukwakhiwa komthomboNokuba amanzi empompo anokubakhoNokuba amanzi asuka emthonjeni asempilweni naisihluzo somseliumthombo wecascade yegadiumthombo wamyezoumthombo wekhonkrithiixabiso lomthombo wegadiumthombo wamyezo wabantwanaumthombo omkhulu wegadiumthombo wegadi indlela yokwenzaumthombo wamatye egadiumthombo omncinci yegadiumthombo wegadi yanamhlanjeumthombo wamva wegadiumenzi wamanzi emithombo yegadiumthombo wokuzoba igadiumthombo wamanzi eludongeniumthombo wamanzi egadiumthombo wamatye egadiityhefu yomntu oselaumthombo omncinci yegadiabaseli esixekweniImithombo yeedolophu yalwaumthombo omncinci wegadiumthombo wegadi yanamhlanjePitnikiimingxunya yamanzibaseliiziselo zabantwanaeziselayo zabantwana ezikolwenibasela abantubasela izinjabasela izikolobagubungele abaselayobasela iipakiisiselo esinxilisayoimpompo yokubuyaumthombo wamanzi elangaAmanzi okuselaimigangatho yokusela yamanziukusela amanzi ePolandukusela amanzi Warsawiimfuno zokusela amanziamanzi avela entwasahloboAmanzi asele evela kwisiseloImithombo yamanziamanzi apompo angaphandleukusela imithombo yamanziintwasahloboumthombo wamanzi okuselaimithombo yegadiiziphethu egadiniintwasahlobo ezikolweniImithombo yamanziumthombo wamanzi okuselaamanzi okusela entwasahloboamanzi okusela entwasahlobo ezikolweni